यो धेरै खेलाडीहरूलाई र कोच फिटनेस केन्द्र नियमित जगिङ को रूप मा आफ्नो शरीर कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ कि कुनै गोप्य छ। पनि एक एक हप्ताको दूरी धेरै पटक मा किलोमिटर दम्पतीले स्वास्थ्य मात्र होइन सुधार हुनेछ तर पनि एकदम भौतिक अवस्था असर गर्छ। दिन को के समय चलाउन सर्वश्रेष्ठ छ: तर सबै शुरुवात धावक नै प्रश्न सास्ती? यस लेखमा शुरुआती यो र अन्य प्रश्नहरूको जवाफ प्रयास गर्नेछ।
चालु राम्रो शारीरिक आकारमा आफ्नो शरीर कायम राख्न सबैभन्दा, सरल किफायती र प्रभावकारी तरिका हो। साथै दैनिक jogs धन्यवाद, दुई वा तीन अतिरिक्त किलो को हटाउनु फेरि आफ्नो क्षमता मा विश्वस्त महसुस र हरेक दिन रमाइलो गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर गरेको पासो के ट्रेडमिल लुकाउँछ, र के प्रश्न नै हरेक नव आगन्तुक सेट विचार गरौं?
दिन को कुन समयमा शुरुवात चलाउन राम्रो छ? पहिलो स्थानमा यो सबै आफ्नो दैनिक तालिका, लक्ष्य र समय उपयोग मा निर्भर गर्दछ। तपाईं लेट चलिरहेको छ भने, तपाईंले आफ्नो शरीर दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु हुँदैन र किरण मा पाँच घण्टे चढाई jogs - यो दृष्टिकोण गंभीर तनाव तर केही छ, आफ्नो शरीर ल्याउनेछ। धेरै विशेषज्ञहरु आफ्नो शरीर लागि पूर्ण छ त्यो दिन को एक समयमा चलाउन सल्लाह। के समय पत्ता दिन राम्रो छ यसलाई चलान गर्न विधि नमूना गर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्याप्त लागि दिउँसो र साँझ, एक jog बिहान सबेरै व्यवस्था गर्न प्रयास गर्न।
नियम, बीस-दुई घण्टा क्षेत्रमा झूठ र छ वा सात बजे, नास्ता अघि सर्वश्रेष्ठ बिहान jog वरिपरि उठ मानिसहरू। यो न्यानो-अप मात्र एक उत्कृष्ट टोन मा एक दिन होइन हुनेछ, तर पनि केही अतिरिक्त किलो गुमाउन मद्दत। तपाईं सम्भवत दुई वा तीन बिहान रन (शरीर दिन पहिलो प्रशिक्षण मुश्किल पछि नाम), त्यसपछि लागि बच्न व्यवस्थित भने, तपाईं यसलाई नास्ता अघि चलान गर्नुपर्छ। प्रश्न मा, र यो हानिकारक बिहान चल्न यदि छ, धेरै खेलाडीहरूलाई नै पूरा - तिनीहरूले अनुभव जगिङ आफ्नो वर्ष को उदाहरण उद्धृत, र तपाईं सुरक्षित यस्तो प्रतिक्रिया सुन्न सक्नुहुन्छ।
दिउँसो रन थुप्रै वयस्क किनभने दैनिक workload र व्यस्त तालिका को परित्याग गर्छन। तथापि, पूर्ण यो विकल्प आवश्यक छैन स्वीकार्दैनन्। पाँच वा थप जो एक साप्ताहिक आधारमा पटक-पटक र अन्त मा प्राप्त परिणाम तुलना गर्न सकिन्छ, (यो सबै धावक को तयारी मा निर्भर गर्दछ) किलोमिटर - उदाहरणका लागि, सप्ताह समयमा, तपाईं एक ठूलो दूरी मा एक दिउँसो jog बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तर सूर्य मा तापमान जगिङ देखि तर्साउने तथ्याङ्कले नगर्न र दिन को एक कूलर समय तिनीहरूलाई सार्न सर्वश्रेष्ठ छ पुगेपछि, गर्मी को उचाइ त्यो भूल छैन।
तर दिन को के समयमा बिहान अत्यन्तै व्यस्त वा साईट धावक बस काम गर्न प्रारम्भ मा चलिरहेको आफ्नो समय समर्पित गर्न सक्दैन कारण छ भने, चलाउन राम्रो छ? साँझ नियमित रन हल्कासित नलिनुहोस्। निस्सन्देह, जगिङ जस्तै केहि बिहान दिन हुनेछ, तर अझै पनि साँझ बियर को एक बोतल या एक स्वादिष्ट केक साथ टीभी अगाडि बसेर धेरै बढी उपयोगी चलाउन!
आफ्नो दैनिक दिनचर्या एक बिहान jog लागि संभावना समाप्त भने, राति चलाउन प्रयास, तर यो एउटा भोजन र सुत्नेसमय दुई घण्टा पछि कम्तिमा एक घण्टा गर्नुपर्छ।
सामान्य मा, दिन को के समय चलाउन सर्वश्रेष्ठ छ प्रश्न, उत्तर, तपाईंको सम्पूर्ण मोड र प्रतिक्रिया मा विभिन्न समयमा चलाउन निर्भर गर्दछ। तर मुख्य कुरा दिन को कुनै पनि समय नियमित जगिङ बानी मा प्रवेश गर्ने छ कुनै भन्दा धेरै बढी उपयोगी सम्झना गर्न!
Sergey Ustyugov: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
घाम Calafell स्पेन - सर्वश्रेष्ठ कोस्ट Resort
गेस्ट हाउस "लिली", Lazarevskoye: सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
Feudalism को युग मा घर धनी। रूस मा Feudalism को युग
विवरण, यात्रा, प्रशंसापत्र: Tales को प्रदर्शनी केन्द्र मास्को मा "एक पटक एक समय मा" को घर
फैशन रुझान, रोचक संयोजन र व्यवसायीक को सिफारिसहरू: बेज ब्यालेट फ्लैट्स लगाउन के बाट
कागति संग पानी। शरीर को लागि लाभ
र कुनै पनि समयमा कुनै पनि रकम कुन खाद्य पदार्थ खाएको गर्न सकिन्छ?
HUD (व्यायाम) - व्यायाम जीवन prolongs। व्यायाम को प्रभावकारिता प्रतिक्रिया